चर्चित 'नोत्रे दाम कथिड्रल' चर्चमा लागेको भीषण आगलागी नियन्त्रण बाहिर(भिडियोमा हेर्नुहोस् !)| Nepal Pati
चर्चित ‘नोत्रे दाम कथिड्रल’ चर्चमा लागेको भीषण आगलागी नियन्त्रण बाहिर(भिडियोमा हेर्नुहोस् !)
प्यारिस । सोमबार राती ८५० वर्ष पुरानो चर्चित ‘नोत्रे दाम कथिड्रल’ चर्चमा भीषण आगलागी भएको छ । आगोले चर्चको माथिल्लो भाग खरानी बनाएकाे तथा छाना पूर्ण रुपमा ध्वस्त बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सन् १२६० मा निर्मित उक्त कथिड्रलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन अग्निनियन्त्रकहरू प्रयासरत छन् । र्चका थप कला कृति क्षति हुन नदिन अग्निनियन्त्रकहरु खटिइरहेका हुन् । यद्यपि, नियन्त्रणको प्रयास सफल भएको छैन ।
फ्रान्सको इतिहास र सभ्यता बोकेको चर्चमा कसरी आगो फैलियो भन्ने खुलेको छैन । यद्यपि, जीर्णोदारको काम भइरहेकाले यसको सम्बन्ध आगलागीसँग हुनसक्ने अनुमान गरिएका छन् । पेरिसको अभियोजनकर्ताको कार्यालयले घटनाबारे अनुसन्धान थालेको बताएको छ ।
‘यो चर्च हाम्रो इतिहास हो । यसलाई हामी सबै फ्रान्सेली मिलेर पुरानै अवस्थामा पुर्याउने छौं’, राष्ट्रपति म्याक्रोनले चर्चमा भएको क्षतिबाट स्तब्धहरुलाई सान्त्वना दिँदै भनेका छन् ।
आगोले निम्त्याएको विध्वंस हेर्न हजारौँ प्यारिसवासी र पर्यटकहरू सडकमा छन्।
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखिएको कोर...